Ijaarsi buufata xiyyaaraa Dambi Dolloo %95 ga'e
Sadarkaa buufatichi irratti argamu gartokkeen
Damee Ijaarsa Bu'uuraalee Misoomaa Geejibaatiin Distiriiktii Suphaa Daandii Naqamteetiin kan ijaaramaa jiru pirojektiin babal'isa buufata xiyyaaraa Dambi Dolloo isa tokko. Buufanni kun yeroo ammaa ijaarsisaa dhibbaantaa 95 irra ga'uusaa ibsi Korporeeshinii Hojiilee Ijaarsaa Itoophiyaarraa Gaazexaa Bariisaaf ergame ni mul'isa.
Bakka Bu'aan Geggeessaa Hojii Pirojektichaa Injiinar Fireewu Mahaadii akka ibsanitti, baasii qarshii miliyoona 176.7n kan ijaaramaa jiru buufati kun, raawwiinsaa yeroo ammaa %95 irraa ga'eera.
Akka isaan jedhanitti, hojiileen pirojekticha jalatti hammataman ijaarsa daandii gara buufatichaatti geessu, buufata imaltootaa, bakka dhaabbii xiyyaaraa, daandii gara buufata dhaabbiitti geessuufi daandii xiyyaarri irraa fiigu, buufataalee eegumsaafi ijaarsa dallaati.
Akka ibsa Injiinar Fireewutti daandiin asfaaltii xiyyaarri irra fiigu akkaatuma dizaayinii qophaa'eetti halluun dibamaa kan jiruufi nageenyi naannichaa haala gaariin ittifufnaaniifi galteewwan ijaarsaa buufata tikaafi dallaatiif oolan saffisaan dhiyaannaan pirojektichi baatiiwwan lama keessatti guutummaatti ni xumurama.
Qopheessaan Oduufi Maxxansaa Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Godina Qeellem Wallagaa, Obbo Iddoosaa Yoonaas, ibsa dabalataa Roobii darbe dhimma kanarratti kennaniin lafti xiyyaarichi irra buufatu duraan cirracha ture asfaaltii uwwifamuusaa eeru.
Fageenyi buufatichaa Magaalaa Dambi Doolloorraa tilmaamaan kiiloomeetira lamaa akka ta'u kan ibsan Obbo Iddoosaan, komiin buufatichi qulqullinaan hinxumuramne jedhee ummanni kaasaa ture deebii argachaa akka jirus ibsaniiru.
Daandiin gara buufatichaa geessu dhoqqee kan tureefi yeroo roobaattis rakkoo uumaa turuu himanii, yeroo ammaa asfaaltiittii jijjiramuu ibsaniiru.
Bakki buufata imaltootaafi tarminaaliin xiyyaaraa akka hojjetamuuf qaama pirojekticha geggeessurraa ibsamuus eeranii, hanga ammaatti wanti hojjetamee garuu kan duraan yeroof jedhamee qorqorroorraa ijaarame malee wanti mijate akka hinjirre kaasaniiru.
Kana malees konkolaataan sa'aatii balalii xiyyaaraatti magaalaarraa gara buufatichaa imalaa geessu mijaa'uu dhabuufi gatiin imalaas qaala'uu ammayyuu ummanni akka komiitti kan kaasu ta'uu dubbataniiru.
Buufatichii wayita hojii eegalutti torbanitti yeroo lama tajaajila balalii kan kennu ta'uunis ibsameera.
Torban kana/This_Week 12458
Guyyaa mara/All_Days 1296969